Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Qatar Airways manamarika ny 10 taona sidina any Canada
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Jolay 1, 2021
Qatar Airways manamarika sidina 10 taona any Canada
Hatramin'ny 2011, ny fanoloran-tenan'i Qatar Airways amin'ny tsena kanadiana dia nanamafy ny varotra iraisam-pirenena, ny fizahan-tany ary ny fifanakalozana isam-batan'olona.
Ny dian'i Qatar Airways tany Kanada dia nanomboka tamin'ny volana Jona 2011 niaraka tamin'ny sidina telo isan-kerinandro nankany Montréal.
Tsy nitsahatra nanidina nankany Montréal nandritra ny areti-mandringana COVID-19 i Qatar Airways.
Hatramin'ny nandefasana azy voalohany tamin'ny volana jona 2011, ny Qatar Airways dia nanidina in-3,400 XNUMX mahery teo anelanelan'ny Doha sy Montréal.
Qatar Airways dia nanamarika dingana lehibe tamin'ny tantarany niaraka tamin'i Canada, nankalaza 10 taona nahombiazana taorian'ny sidina voalohany nataony teo anelanelan'i Doha sy Montréal-Trudeau International Airport (YUL). Ny dian'ilay zotram-piaramanidina tany Kanada dia nanomboka ny volana jona 2011 niaraka tamin'ny sidina telo isan-kerinandro nankany Montréal, ary nitatra efatra isan-kerinandro tamin'ny desambra 2018 ary nahatratra asa fanompoana isan'andro tamin'ny febroary 2021.
Qatar Airways tsy nitsahatra nanidina nankany Montréal nanerana ny areti-mandringana COVID-19, ary ny zotram-pitaterana dia manohy manome làlan-kizo ho an'ny Kanadiana hody avy any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Rehefa avy niara-niasa akaiky tamin'ny Governemanta Canada sy ny masoivoho izy tamin'ny tampon'ny vonjy taitra ara-pahasalamana manerantany, Qatar Airways dia niasa vonjimaika ihany koa tolotra telo isan-kerinandro tany Toronto ho fanampin'ny sidina marobe mankany Vancouver hanampiana hitondra an-tanindrazana teratany kanadiana 44,000 XNUMX sy mponina tafahitsoka. any ivelany.
Hatramin'ny nandefasana azy voalohany tamin'ny volana jona 2011, ny Qatar Airways dia nanidina in-3,400 1 mahery teo anelanelan'ny Doha sy Montréal, nahafahan'ny mpandeha raharaham-barotra sy fialamboly 350 tapitrisa nifandray tamina toerana malaza tany Afrika, Azia, Moyen Orient sy ny sisa. Ny serivisy Montréal dia tantanan'ny Airbus A900-36 mahavariana solika Qatar Airways ankehitriny misy seza 247 ao amin'ny Qsuite Business Class izay nahazo loka ary 100 no sokajy Economy Class. Qatar Airways Cargo dia manolotra mihoatra ny XNUMX taonina ny fahaiza-manaon'ny entana isan-kerinandro amin'ny lalana tsirairay amin'ny làlana Doha- Montréal -Doha.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny vondrona Qatar Airways, Andriamatoa Akbar Al Baker, dia nilaza hoe: “Nanakaiky anay hatrany i Qatar Airways i Canada. Tsaroako ny avonavona tsapako fony isika voalohany nitafa tany Montréal tamin'ny 2011, ary fantatro tamin'izay fa ity dia fiandohan'ny fifandraisana matanjaka sy maharitra amin'i Canada. Nandritra ny taona maro dia nanatri-maso ny tombontsoa azo avy amin'ny serivisinay ho an'i Kanada izahay izay mihoatra lavitra noho ny iraka nampanaovinay olona. Ny sidina nataonay dia nahafahan'ny mpitsangatsangana eran'izao tontolo izao hiaina ny fahaizan'ny vahiny mandray vahiny manohana ny fanondranana ny vokatra kanadiana amin'ny tsena any ivelany.
Ny valiny ofisialy an'ny Delta COVID-19 dia manimba ny dia an-dranomasina ...
Nofoanan'i Tokyo ny famerana ny trano fisakafoanana noho ny COVID-19 vaovao…
Fivarotana Facebook.com amidy: Cyberattack
Nanambara ny fandaharam-potoana lehibe indrindra tany Jordania i Ryanair Ity ...
Blossom Hotel Houston dia nanitatra tolotra fanokafana vaovao ho an'ny...
Lafo loatra ny dia any UK
Ny tsy fetezan'ny vaksiny dia mety hanakana ny fanarenana vaovao
Nandray ny vaovao ny Distrikan'ny fialamboly any Toronto ...
Drafitra fitsangatsanganana: izay hifandonan'i Gen Z, Millennial ary Gen X ...
Tanàn-dehibe mozika mivantana 10 eran-tany
Seychelles dia nahavita marika nahomby tao amin'ny IFTM Top Resa
Andiana générie diesel vaovao nambaran'ny Generac Mobile